Maxay yihiin sifooyinka lamaanaha aan faraxsanayn? Bezzia
Maxay yihiin sifooyinka lamaanaha aan faraxsanayn?
Maria Jose Roldan | 10/05/2022 22:12 | Xiriirka
Waxaa jira qiyam taxane ah oo aan ka maqnaan karin xiriir kasta: jacayl, ixtiraam ama kalsooni. Dhammaan qiimayaashan ayaa ka caawin doona lammaanaha inay faraxsanaadaan oo ay sii jiraan waqti ka dib. Taas bedelkeeda, farxad la'aanta xiriirka ayaa inta badan sabab u ah dhibaatooyinka lammaanaha marka ay timaado wada noolaanshaha iyo la'aanta qaar ka mid ah qiyamka kor ku xusan.
Nasiib darro maanta, waxaa jira lamaanayaal badan oo aan faraxsanayn iyo kuma raaxaystaan ​​curaarta la abuuray. Maqaalka soo socda waxaan ku tusineynaa sifooyinka uu leeyahay xiriirka aan faraxsaneyn inta badan iyo waxa la sameeyo si looga fogaado xaaladdan.
Astaamaha xiriirka aan faraxsanayn
Waxaa jira dhowr astaamood oo caawinaya in la aqoonsado xiriirka aan faraxsanayn:
Waa xidhiidh heerka dalabka labada dhinac uu aad u sarreeyo. Mid waliba waxa uu kan kale ka filayaa in uu u dhaqmo si waafaqsan shuruudihiisa mar kasta, iyada oo aan la tixgelinayn ra’yiga shakhsi ahaaneed ee lammaanaha. Waxaas oo dhami waxay dhalinayaan doodo iyo khilaafaad aan haba yaraatee faa’iido u lahayn mustaqbalka wanaagsan ee lammaanaha.
Cawaaqibka dalabka ayaa ah dulqaadka yar ee ka dhex jira lamaanaha. Khaladaadka qaarkood ee horseeda dagaal dhexmara dhinacyada lama ogola. Dulqaadka yari waxa uu keenaa cay iyo u qalmi la'aan in ay noqoto maalin walba iyo farxad la'aan ayaa si buuxda loogu rakibay xiriirka dhexdiisa.
Isticmaalka dembiga si loo caddeeyo xaaladda maskaxda waa wax lagu garto inta badan lamaanaha aan faraxsanayn. Lammaanaha mar walba eed uma yeelan karo caafimaadka shucuureed ee qofka. Waxaas oo dhan waxay keeni doonaan dhibaatooyin badan xiriirka iyo in wada-noolaanshiyaha uu noqdo mid aad u adag dhinac walba.
Lamaanaha aan faraxsanayn ma aha koox iyo ma awoodo in uu si wadajir ah u xaliyo dhibaatooyinka kala duwan. Xidhiidhka farxadda leh, waxa la sameeyaa oo loo qorsheeyaa si caddaalad ah, iyada oo la tixgelinayo mid kasta oo ra'yigiisa ah. Labada dhinac waa inay isku jiho u safraan oo si wada jir ah isu taageeraan.
Xidhiidhka aan faraxsanayn, dhinacyadu waxay ku doodaan wax walba iyo inay arkaan labada middood. Taas looma ogolaan karo xaalad kasta, waxaana lagu talinayaa in la soo bandhigo dhibaatada laga hadlayo si loo helo xalka ugu fiican. Faa'iido ma leh inaad xanaaqdo ama la dooddo lammaanahaaga, maxaa yeelay tani waxay ka sii dari doontaa uun.
Gaaban, Ma fududa in aad ka farxiso lamaane gaar ah mar walba. La noolaanshaha lamaanahaaga waxay ka dhigaysaa mid adag oo dhibaatooyin ayaa soo bixi kara si joogto ah. Ma habboona in la ilaaliyo xidhiidhka aan faraxsanayn inta badan maadaama uu yahay wax aan faa'iido u lahayn labada dhinac. Farxaddu waa shay ay tahay inay ku jiraan lamaane kasta oo loo arko inay caafimaad qabaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Maxay yihiin sifooyinka lamaanaha aan faraxsanayn?
Cuntooyinka qani ku ah birta ee cuntada ilmaha